Uludwe lweeHholide zeNtshisekelo kumaAfrika aseMerika
Okweshumi kunye ne-Firsta Yenza le Roundup
Iholide ezininzi zivela kwiikhalenda zase-US ngamnye ngonyaka kunokuba amaMerika angakwazi ukuqhubeka kunye nawo, kuquka abo banomdla kwi-Afrika yaseMerika. Kodwa uluntu jikelele alukwazi ukuqonda ukuba zeziphi iholide ezikhunjulwayo. Thatha i- Kwanzaa , umzekelo. Uninzi loluntu luye lwava ngeeholide kodwa luya kuba nzima ukuchaza injongo yalo. Ezinye iiholide ezinomdla kuma-Afrika aseMerika, afana noLuthando Lwama-Day kunye no-Okweshumi, azikho nje kwi-radar yamaMerika amaninzi. Ngale ngqungquthela, qaphela indlela ezi holide zaqala ngayo kunye nemvelaphi yemikhosi efana neNyanga yeMbali yeMnyama kunye noMartin Luther King Usuku oluqhelekileyo oluqhelekileyo kuwe.
Yintoni eyishumi elineshumi?
Isikhumbuzo seSikhumbuzo seshumi elinesixhenxe kwiMyuziyam yaseGeorge Washington Carver eAustin, eTexas. NguJennifer Rangubphai / Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0]
Ubukhoboka buphela nini eUnited States? Impendulo yaloo mbuzo ayifuni ngokucacileyo njengoko ibonakala. Nangona amaninzi amakhoboka athola inkululeko emva kokuba uMongameli uAbraham Lincoln asayine i-Emancipation Proclamation, amakhoboka aseTexas kwafuneka alinde iminyaka engaphezu kweyesibini neyesibini ekufumaneni inkululeko. Ngaloo nto i-Union Army yafika eGalveston ngoJuni 19, 1865, yalela ukuba ubukhoboka kwi-Lone Star State buphele.
Ukususela ngoko, abantu base-Afrika baseMelika bawubhiyozele loo mhla njengoSuku lwe-Independent Day. Okweshumi ngeholide yeburhulumenteni yaseTexas. Kukwaqatshelwa ngamazwe angama-40 kunye neSithili sase-Columbia. Abameli abashumi elinesibhozo basebenzele iminyaka bebenzela urhulumente wephondo ukuba aqalise umhla wesizwe wokwamkelwa. Kaninzi "
Ukukhumbula Usuku Lothando
UJoel Edgerton, uRute Negga kunye noMlawuli uJeff Nichols baya kwiNkulumbuso yeNew New York kwi-Landmark i-Sunshine Theater ngo-Oktobha 26, 2016 kwisixeko saseNew York. Ifoto nguJohn Lamparski / WireImage
Namhlanje umtshato wezentlupheko e-US phakathi kwabamnyama nabamhlophe kukhula kwinqanaba lokuqhawula irekhodi. Kodwa iminyaka, iindidi ezahlukeneyo zavimbela imibutho enjalo ukuba yenzeke phakathi kwama-Afrika aseMelika namaCaucasian.
Umbhangqwana waseVirginia ogama linguRichard noMildred Loving bajongene nemithetho yokuchasana nemithetho yezinto ezingekho emthethweni kwiincwadi zabo zasekhaya. Emva kokuba babanjwe kwaye babetshelwe ukuba babengenakuhlala eVirginia ngenxa yobumbano lwazo lwentlupheko-uMildred wayengumnyama kunye noMdabu waseMerika, uRichard wayemhlophe-iMithando yagqiba ukuthatha isenzo somthetho. Icala labo lafika kwiNkundla ePhakamileyo yase-United States, eyagqiba isigqibo ngo-Juni 12, 1967, ukulwa nemithetho yokuchasana nemithetho yelizwe.
Namhlanje, abamnyama, abamhlophe, nabanye bawubhiyozela ngoJuni-12 njengoSuku loLuthando kulo lonke uhlanga. Kaninzi "
SoulChristmas / Flickr.com
Abaninzi baseMerika bancinane beva ngeCaaaa. Baye babona imikhosi ye-Firsta iboniswe kwiindaba eziphathekayo ebusuku okanye zibone amakhadi e-greetings ye-Kwanzaa kwiindawo zeeholide zeevenkile. Sekunjalo, abanakho ukuqonda ukuba lithini iholide leentsuku ezisixhenxe ezikhunjulwayo.
Ngoko, yintoni i-Firsta? Ibonisa ixesha lokuba ama-Afrika aseMerika acinge ngelifa labo, uluntu kunye nokuxhamla kwabo kwi-Afrika. Ngokuqinisekileyo, into engalunganga kakhulu ngeCaaa kukuba yi-Afrika kuphela yamaMerika anokuthatha inxaxheba kulo mcimbi. Kodwa ngokwe-website yaseburhulumenteni ye-Firsta, abantu abavela kwimimandla yobuhlanga banokuthatha inxaxheba. Kaninzi "
Indlela iNyanga yeMbali yeMnyama eyaqala ngayo
I-Getty Izithombe ngokusuka kwinqanaba lasekuhlaleni: I-Afro Newspaper / Gado / Iifoto ze-Archives; I-Pictorial Parade / Iifoto ze-Archives; Mickey Adair / i-Hulton Archive; UMichael Evans / i-Hulton Archive; Umgcini woPhicotho / i-Hulton Archive; I-Fotosearch / Iifoto ze-Archive
Inyanga yeMbali Yomnyama yinto yokugcinwa kwenkcubeko kunye nabo bonke abantu baseMerika baqhelana nabo. Sekunjalo, abaninzi baseMelika ababonakali baqonda i ngongoma yenyanga. Enyanisweni, abanye abamhlophe baye bathi ibanga leNyanga yeMbali eliMnyama libandlulula ngenxa yokuba libeka ixesha lokukhumbula izimpumelelo zabaseMerika baseMelika. Kodwa umbhali-mlando uCarter G. Woodson uqalise iholide, eyayibizwa ngeveki yeNigro yeSiganeko kuba iminikelo eyenziwe ngabantu baseMerika kwiinkcubeko kunye noluntu lwase-US yayinganyaniseki kwiincwadi zembali ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ngaloo ndlela, iVeki yeMbali yeNigro yaphawula ixesha lokuba isizwe sichaze malunga nawaphi abamnyama abaye baphumelela kwilizwe ngenxa yokubandlulula ubuhlanga. Kaninzi "
UMartin Luther King Day
UStephen F. Somerstein / Iifoto ze-Archives / Getty Images
ISityhilo uMartin Luther King Jr. Uhlonishwa namhlanje ukuba kunzima ukucinga ixesha apho abameli be-US bengayichasa ukudala ieholide ngokuhlonipha igosa lamalungelo abantu ababuleweyo. Kodwa ngowe-1970 kunye neyokuqala kwama-80, abaxhasi bakaKumkani basebenzela imfazwe ekukhuphukeni ukuze benze iKhosi yaseburhulumenteni iholide. Ekugqibeleni ngowe-1983, umthetho weSizwe uKhosi weeholide waphuma. Funda kabanzi malunga nabantu balwela iholide kunye nezopolitiko abachasene nemigudu yabo. Kaninzi "
5 Imizekelo yoBuchule bobuNtu eMelika
Imbali emfutshane yoBandlululo loMzantsi Afrika
IiRegents of University of California v. Bakke
Amaqiniso Ngendlela Imali Yembali Yamnyama Eqala ngayo
Iimiphumo zobuhlanga ngexesha leMfazwe yehlabathi II
Iiphakamileyo ezintathu zeNkundla eziPhakamileyo ezibandakanya i-Japanese Internation
Indlela i-Navajo yamaSolomon yaba ngayo iNdizwe yeMfazwe ye-II Code Talkers
I-American Indian Movement (AIM)
Ziziphi iiMveliso eziShatshazo?
Ukulingana kwama-Fools ka-Aprili 'agujwa ngoDisemba
Indlela Yokuthi Inyama YeJapan Inyama
Amacandelo okuCombulula abantu abanovayo
Konke malunga neentsika eziphezulu
Iingqinisiso ezisixhenxe Ngeengxabano zaseLincoln-Douglas
Iintlanganiso zamaKlasi ancedisa uFoster onoxanduva, ukuziphatha kwabafundi
Kutheni i-Glue ingabambeleli ngaphakathi kweBhotile?
Iimpawu zeKrismesi eziKhuselayo Awuzange uzizwe
Iingoma zokuBonga zeNkolo
Umqeqeshi weeNgingqi - I-Job yokuqala kwi-Archeology
Iifilimu eziphezulu zePasika
Ngaba i-AP yakho yePavati yokuVavanya iFanelekile?